बच्चाहरूको नाकमा तीन हप्तासम्म कोरोनाभाइरस रहन सक्छ – दक्षिण कोरियाको एक अध्ययन – Tahalka Nepal
Tahalka Nepal / समाचार / समाज / स्वास्थ्य / बच्चाहरूको नाकमा तीन हप्तासम्म कोरोनाभाइरस रहन सक्छ – दक्षिण कोरियाको एक अध्ययन
बच्चाहरूको नाकमा तीन हप्तासम्म कोरोनाभाइरस रहन सक्छ – दक्षिण कोरियाको एक अध्ययन
. २०७७ भाद्र १४, आईतवार २०:४४ गते
तहल्का नेपाल, भदौ १४ –
पहिलेका अध्ययनहरूले पत्ता लगाए अनुसार बहुसंख्यक बच्चाहरूमा भाइरस हल्कारुपमा रहेका हुन्छन् वा संकरमणको कुनै लक्षणहरू नै देखापरेका हुँदैनन् । तर यी खोजहरूले बालबालिकाहरू बाट अन्य व्यक्तिमा भाइरस कसरी फैलाउने सम्भावना रहेको हुन्छ भन्ने कुराको समाधान नगरिएको तर्फ उब्जिएका प्रश्नहरुमा प्रकाश पारेका छन् ।
अध्ययनले सामाजिक दुरीको निरन्तर भूमिका र राम्रो सरसफाइको बारेमा जोड दिएको छ, जब बच्चा स्कूल जान्छन् तथा फर्कन्छन् । रोयल कलेज अफ पेडियाट्रिक्स एण्ड चाइल्ड हेल्थका अध्यक्ष प्रोफेसर रुसेल भिनरका अनुसार तीन अलग अलग छन्, तर बच्चाहरू र कोभिड -१९ को बारेमा सम्बन्धित प्रश्नहरू आपसमा गाँसिका हुन्छन् ।
के बच्चाहरूलाई भाइरस लाग्छ ?
तिनीहरूले कती गम्भीर भाइरस लाग्दछ ?
के तिनीहरू अरूलाई सार्दछन् ?
जहाँसम्म हामीलाई यो कुरा थाहा छ कि बच्चाहरूलाई भाइरस लाग्न सक्दछ । प्रोफेसर भिनर भन्छन् कि एन्टिबडी रक्त परीक्षणका तथ्याङ्कहरूले वयस्कहरू भन्दा विशेष गरी १२ बर्ष मुनिका बच्चाहरूलाई भारस सर्ने सम्भावना कम हुन सक्छ भन्ने सुझाव दिन्छ ।
साथै, वैज्ञानिकहरू धेरै विश्वस्त छन् कि बच्चाहरू वयस्कहरूको तुलनामा बिरामी हुने सम्भावना कम भएता पनि उनीहरूमा यो सर्यो भने पनि धेरैमा कुनै पनि लक्षणहरू देखाएको पाईंदैन । उक्तकुरा गत शुक्रवार प्रकाशित ब्रिटिश अध्ययनले गरेको पुष्टि गरेको बताईएको छ ।
तेस्रो प्रश्न जसकाबरेमा हामी कम जान्दछौं, साथै यो दक्षिण कोरियाली अध्ययन बाट सम्बोधन गर्ने प्रयास हो ।
दक्षिण कोरियाली अध्ययनले के भन्छ ?
उक्त अध्ययनमा ९१ जना बालबालिकाहरुको सहभागिताका आधारमा पत्ता लाग्यो कि थोरै वा केही लक्षण नभएका मानिसहरूमा पनि भाइरस तीन हप्ता पछि उनीहरूको स्वाबमा फेला पार्न सकिन्छ । नाकमा पत्ता लगाउन सक्ने भाइरस छ भन्ने तथ्यलाई लेखकहरूले निष्कर्षकारुपमा भने कि बालबालिकाहरु भाईरस सार्न सक्षम छन् ।
दक्षिण कोरियाले परीक्षण गरेको, पत्ता लगाएको र पृथक भएका केसहरूको कारणले गर्दा पनि लक्षणविना नै ती व्यक्तिहरू एउटा समूहमा हेर्नका लागि अलगरुपमा राखियो ।
संक्रमितहरुको एक पटक पहिचान गरेपछि, केसहरूलाई अलग गर्नुका साथै भाइरस पुर्णरुपमा सफा नभएसम्म बिरामीहरूलाई बारम्बार जाँच गरियो ।
यस अध्ययनले हामीलाई भाइरसको क्यारियरको रूपमा बच्चाहरूका बारे केही नयाँ जानकारी दिन र उनीहरूको भाइरस सार्न सक्ने सम्भावित क्षमतावारे नयाँ जानकारी दिन सक्षम बनायो ।
किनकि भाइरस बच्चाको नाकमा फेला पर्दछ तर निश्चित रूपमा प्रमाणित गर्दैन कि उनीहरूले यसलाई वयस्कहरूको रूपमा समान दरमा सार्दैछन् ।
वाशिंगटन डीसीको बाल राष्ट्रिय अस्पतालमा बाल रोग महाशाखाका प्रमुख डा. रोबर्टा डेबियासीले भाइरस सर्दा उनीहरूको प्रसारणमा बच्चाहरूको कुनै भूमिका छैन भन्ने कुरा सोच्नु तार्किक हुनेछ ।
तर लिभरपूल युनिभर्सिटीका बाल स्वास्थ्य प्राध्यापक, प्रोफेसर Calum Semple ले भने: “श्वासप्रणालीमा रहेको स्वाबमा भाइरस आनुवंशिक सामग्रीको उपस्थिति प्रसारणको बराबरी हुनु जरूरी छैन, खास गरी खोक्दा र छींक जस्ता महत्वपूर्ण लक्षण नभएका मानिसहरुमा । ”
त्यसोभए के हामी कुनै निष्कर्षमा पुग्न सक्छौं ?
तर्क प्रस्तुत गरिएको पाईन्छ कि दुबै बच्चाहरू र वयस्कहरूमा, वा केही लक्षण भएका वा केही लक्षणहरू नभएका व्यक्तिहरू – जसले खोक्छन र हावामा भाइरस फैलाउने गर्दैनन् – त्यस्तो व्यक्ति कम संक्रामक हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ, साथै बच्चाहरूमा सामान्यतया यो रोगको कम संक्रमणको मामिला रेहेको हुन्छ ।
तर एसिम्प्टोमेटिक व्यक्तिको उल्लेखनीय संख्याले संक्रमणमा अझै प्रभावकारी हुन सक्छ । प्रोफेसर विनरले भनेझैं, स्कूलहरू बन्द राख्नु मात्र तटस्थ हुँदैन तर उनीहरू आफ्नै किसिमका जोखिमहरू वहन गर्न विवस भएका हुन्छन् जस्तो – बच्चाहरूको विकास, शिक्षा र मानसिक स्वास्थ्य ।
जबकि सही जोखिम बच्चाहरु पोज को लागी एक खुला प्रश्न रहन्छ, यसको उत्तर भविष्यको प्रकोप नियन्त्रण गर्न महत्वपूर्ण हुनेछ ।
डा. डिबियासी विश्वास गर्छन् कि “संक्रमित धेरै जसो बच्चाहरूलाई हल्का वा अपरिचित रोग रहेको छ”, उनीहरूले समुदायमा संक्रमण फैलाउन “महत्वपूर्ण” भूमिका खेल्न सक्छन् ।
सीको नयाँ आधुनिक समाजवादी तिब्बतको निर्माणमा जोड